Maxbuuskii jeelka ku abaaday ee magdhawga helay - BBC News Somali
Maxbuuskii jeelka ku abaaday ee magdhawga helay
Sanadkii 2017-kii ayaa Craig Coley wax dambi ah lagu waayey kadib markii lagu xaqiijiyey hidde sidaha DNA
Nin reer California oo si gef ah loogu eedeeyey dil aanu gaysan ayaa lagu abaalmariyey $21m oo magdhawga u ah 38 sano oo uu jeel ku jiray.
Craig Coley, oo 71 jir ah ayaa sanadkii 1978-dii loo xiray dilka lammaanihiisii hore, iyo canugeedii, hase ahaatee marba marka ka dambaysa waxaa soo ifbaxaysay in aanu waxba galabsan.
Ninkaas ayaa la sii daayey bishii November ee sanadkii 2017-kii kadib markii waxba lagu waayey lagana qaaday hidde sidaha DNA kolkaas oo kiis kiisa dib loo eegay.
Magdhawga ayaa waxaa bixin doona maamulka magaalada Simi Valley ayadoo loogu heshiiyay qaab xeer jajab ah.
Maamulaha magaalada Simi Valley, Eric Levitt ayaa yiri " Maadaama aanay jirin lacag goysa wixii gaaray Mr Coley, in xeer jajab lagu xalliyo waxay noqotay tubta ugu saxsan oo aan ku xaal marin karno Mr Coley iyo bulshadeenaba"
'Maxbuus ku dayasho mudan'
Intii uu socday dagaalkii Vietnam ayaa Mr Coley waxaa loo xiray dilka Rhonda Wicht, oo 24 jir ahayd iyo canugeedii Donald oo afar jir ahaa.
Ms Wicht ayaa la helay ayadoo lagu dhex kufsaday laguna dhex ciijiyey gurigii ay ka daganaayeen ayada iyo canugeedu magaalada Simi City.
Booliiska ayaa ugu horrayntiiba ka shakiyey Mr Coley kadib markii gabadh dariska ahayd ay sheegtay in ay gurigaas ku aragtay ninkaas iyo gaadhigiisa kadib markii ay qaylo maqashay.
Kadib markii laba jeer la maxkamadeeyey, ayaa lagu xukumay xabsi daa'in ayadoo aan loo samayn wax ballan qaad ah oo la xiriira in maxkamadayntiisa dib loo dhagaysto. Mana jirin dambiyo hore oo lagusoo oogay.
Goor dambe ayaa waxaa soobaxay in dacwadaha ninkaas loo haysto ay yihiin kuwo is burinaya, afartan sano kadib ayaa waxaa cafiyey guddoomiyaha gobolka Jerry Brown oo sheegay in Mr Coley uu yahay "maxbuus ku daysho mudan"
" In Mr Coley uu usoo dulqaato xarigga iyo cadaalad darrada intaas le'eg waxay ahayd wax aan caadi ahayn" ayuu Mr Brown xilligaas qoray.